magdhawga kireytayaasha - Tenants Victoria
Haddii uu ku guul dareysto milkiilah guriga inuu sameeyo hawshiisa heshiiska kireyste ama Xeerka Kiradda Deganaanshaha 1977, waxaad codsan kartaa magdhaw Golaha Maamulka xeer ilaalinta iyo bulshada.
Marka aad sheeganeyso magdhaw, waa inaad cadeysaa inaad ku dhibtootay wax dhumid (tusaale waxyeelo galabka ah, dhumis qalab, dhumis lacag) ama dhibaatooyin badan ( tusaale. aadan isticmaali karin gurigaaga), taasina waxay tahay natiijadda milkiile guri ama ficilladda wakaalo ama ku guul dareysi xeerka.
goormee iyo maxaad sheeganeysaa?
Waxaad haysataa illaa 6 sannadood laga bilaabo taariikhda mas’uuliyadda ee aad u baahan tahay inaad gudbiso codsi qoraaleedka magdhawga. Waad sheegan kartaa muddada ama kirestahaaga uu ku siinaayo inaad ku jirto waqti xaddidan ee 6 daan sanno.
tusaalooyinka qaar ee xaaladahaan halka aad ku sheegan karto magdhaw maxkamad waa:
haddii uu milkiilaha guriga uusan dayactirin mashaakil ee ad u sheegtay iyaga kuna saabsan (tusaale saqafka oo daadinaya)
haddii milkiilaha guriga uu si sharci darro ah kaaga saaray ama isku dayay inuu kugu saaro si sharci darro ah
haddii milkiilaha guriga uu kugu dhibay ‘ku raaxeysi’ hantida aad kireysatay ( tusaale milkiilaha ama wakaaladda ay iska imaanayaan ogeysiin la’aan iyo/ama sabab macquul ah sida ku qoran liiska Xeerka)
haddii deeganka uusan nadiif macquul ah aheyn markaad soo dageysay
Waa inaad maskaxda ku haysaa in Maxkamadda ay tixgelineyso in aad ku kordhisatay dhumistaada adigoo go’aansanaayo intee magdhaw aad dalabn. Tan micnaheedu waa waa inaad qaadataa tallaabooyin macquul ah si aad ugu yareyso qiimaha aad u baahan tahay. Xittaa waa inaad xaqiijisaa inaad qaadeyso tallaabooyin aad isku dayeyso aad ku hesho milkiilaha isku darridda burburinta, sida soo socota ee ku xusan codsiga haddii ay iyagu addeeceynin.
Maxkamadda waxay leedahay $10,000 magdhaw sheegasho ku xadidan Xeerka Kiradda Degenaanshaha 1997. . Haddii aad dooneyso in aad sheegato in ka badan $10,000 waxaad u baahaneysaa ogolaanshaha milkiilaha guriga, ama waxaad u sameysan kartaa codsi qoraaleedkaaga Xaakinnadda Maxkamadda. Waxaa u dhigma, waxaad awoodaa inaad sameysato sheegashao ku aadan Sharciga Isticmaalaha iyo Ganacsga xaqqa ah ee Xeerka Australian (Vic), kaasoo leh xaddidin la’aan dhaqaale xukminta.
Haddii aad dooneyso magdhaw xanuun, ku dhib qabid, dhaawac jireed ama dhimasho, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto tallo qaadasho Qareen Shaqsiyeedka Dhaawac.
Dhaawac shaqsiyeed waxaad awooddaa inaad ku sheegato si ka duwan sharciga – laakiin aan aheyn Xeerka Kiradda Deganaanshaha 1997 – sidaas talaabooyinka aad u baahan tahay ee aad qaadeyso way ka duwan tahay. EegHelitaanka qareen sax ah (FCLC bar-shabako)amaHel qareen (LIV bar-shabako.
Dacwada ugu caansan ee magdhawga waa marka uu milkiilaha guriga uu ku guul dareysto inuu qabto dayactir. Waa ra’yi fiican inaad sugto illaa dayactirka laga sameeyo ka hor inta aadan sheegan magdhaw, sida ay Maxkamadu mar kasta ma dhageysaneyso dacwooyinka halka magdhawga uu weli ku sii darsamaayo. si kastaba ha ahaatee, waa inaad ku wargelisaa milkiilahaaga guriga in aad damacsan tahay sheegasho magdhaw, iyo inta ay dheereeyaan daahidda dayactir inta badan ee aad awoodid ku sheegasho. Tani waxay mararka qaar sii wadi doonta in milkiilaha guriga qaado sameynta dayactir si dhaqso leh.
Xittaa waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad qaado tallaabo adoo u maraaya VCAT adigoo doonaaya amaro in milkiilaha guriga inuu dhameeyo dayactiradda. VCAT laga yaabe inay amar ku siiyaan ka waswasid la’aan milkiilaha guriga inuu bixiyo magdhawga ee dhammaan muddada oo ay dayactirka lagu lahaa haddii aadan u baahan amar dayactir ee VCAT.
sida loo sheegto
haddii aad dooneyso inaad sheegato magdhaw ee lagu kala qaadayo Xeerka Kiradda Degenaanshaha 1997 ee aadna weli ku jirto hantida, waxaad u baahaneysaa inaad milkiilaha guriga siiso Ogeysiin KAla Qaadisat Hawlaha ( ee laga heli karoXiriirka Macaamiisha Victoria bartooda shabakadda.
Marka aad xareyneyso dacwadda ah Ogeysiin jebin Hawleed waa inaad raacisaa:
milkiilaha guriga magaciisa ( maahin wakaaladda magaceeda
faahfaahinta milkiilaha guriga jebinta ( qaladka y ku sameeyeen)
ficil noocee ah ayuu milkiilaha qaadayaa inuu ku sameeyo dhibaatadda ( tusaale saqaf dayactirid)
magdhawga ee adaa sheeganeyso ee lumis ama waxyeelo ( tusaale qiimaha nadiifinta dharka iyo qalabka ee qoyay iyo natiijadda aha wasaqoobid ee daadinta saqafka) ama dhibaatadda waayo-aragnimadaada (tusaale joogista guri saaxib inta uu qolkaaga jiifka uu biyo buuxsameen)
caddada lacageed ee aad sheeganeyso wax kastoo ee la sameyn karo ( tusaale waxyeelo qalabkaaga ku timid ee sababay biyaha ka soo daadanaayasaqafka)
Inta aan loo baahneyn, waa inaad ku soo lifaaqdaa cadeyn ee jebin illaa Ogeysiinta Hawlaha Jebinta, sidoo kale tani waxaa looga baahan yahay in loo gudbiyo mardambe Maxkamadda. Xaqiiji in cadeymahaaga ay si badqaba loo keydiyay keydna u haysato.
Waad ku sheegan kartaa arrimo badan oo kala duwan halka foom. Ku lifaaq bog dheeri ah haddii aad u baahato bannaan saa’id ah. Haddii aad dooneyso inaad sameyso sheegasho ee lumis raaxo (tusaale awoodid la’aan inaad si buuxda u isticmaasho hantida), waxaad u baahan tahay inaad ku kordhiso qiimo doolar ah tani. Maxkamadda waa inaad awoodid inaad u sharaxdo caddada ee aad sheeganeyso shey kasta bixisaana cadeyn sheegashadaada.
Shaqadda ee sheegashadaada ee lumista raaxo, xisaab isku celcelin ee kiro maalmeedkaaga ( ku saleysan intee hantida ay saameynsay) kuna dhufo tiradda maalmaha ee aad ku kordhisay dhibaatadda. Haddii aad u baahato caawinaad lagaala shaqeeyo caddada ee aad weydiisan rabto, nala soo xiriir.
ii nuqul ah Ogeysiinta Jebinta Hawl milkiilaha guriga ama wakaaladda haysana nuqul naf ahaantaada. Waxaad soo diri kartaa ogeysiin ee boostada caadiga ah ama email (haddii milkiile guri ama wakaalo ayaa oggolaaday in uu idin siinayo ogeysiisyada by email) laakiin waxaanu kugula talinaynaa in aad isticmaasho warqad diiwaangashan ama wuu soo gelin in qof si aad u caddeyn karto inay heleen. Hayso risiidhka fariinta aad. Haddii aad soo diri ogeysiin ah by email, waa in aad hubiso in ay tahay in cinwaanka email ugu magacaabay milkiile guri ama real estate ee wakaalo iyo haddii ay suurtogal tahay codsi rasiidka akhrin. Waa inaad sugtaa 14 maalmood si aad u aragto haddii uu milkiilaha ku siinayo magdhawga. haddii aad ku dirto boostada, waxaad u baahaneysaa inaad ka sugto maalmo dheeri ah boostada si ay kuugu keenaan. Fiiriwaqtiyadda keenista boostada ee Australia.
Haddii milkiilaha guriga uusan ku siinin qarashak, waxaad codsi qoraaleed u qoran kartaa Golaha Maamulka Xeer Ilaalinta bulshadda ee Victorian. Buuxi foomka VCAT ee codsi qoraaleedka kuna lifaaq nuqul Ogeysiinta Jebinta Hawlaha. Waa inaad bixisaa VCAT qarashka codsi qoraaleedka waa inaad codsi qoraaleedkaaga weydiisa dib u soo celin qarashka codsi qoraaleedka. Lacag dib u soo celinta ee qarash codsi qoraaleed kasta waxaa go’aaminaaya Maxkamadda ee ku saleysan wixii ka soo baxay dhageysiga.
haddii aad ka guurto hantidda
Haddii aad dooneysid inaad sameysid sheegasho magdhaw kadib markaad ka guurtid hantida, uma baahnid inaad u adeegto Ogeysiinta Jebinta Hawlaha. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad buuxiso foomka codsi qoraaleedka Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda Victorian. Foomka codsi qoraaleedka waa inaad ku sheegtaa intee in la eg oo magdhaw ah ayaad raadineysaa iyo sababta aad u raadineyso.
Waa fekred aad u wanaagsan inaad u qorto ka hor inta aadan sameynin cdsi qoraaleedka si aad u aragto haddii aad xalin karto arrimaha ka hor inta aadan aadin Maxkammadda. Waa inaad ku sheegtaa warqaddaada in aad codsi dacwo geyn doontid Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda ee Victorian haddii aysan ogolaanin inayku bixiyaan qarashka waqti go’an sida 14 maalmood. Hayso nuqul warqada ah si aad ugu isticmaasho cadeyn Maxkamadda.
Dacwooyin badan, haddii milkiilaha uu kugu sheegto wax adiga lid ku ah isku xerkaaga, laga yaabe inay ku haboon tahay in la sameeyo sheegasho ka oo horjeeda magdhawgaaga. qaabkani labadda sheegasho wxaa la go’aamin karaa isla waqtigaasi intii la lahaan lahaa labo dhageysi. Haddii aad adigana ku guuleysato waxaa laga yaabaa inaad hesho in badan oo isku xer ah kuu soo laabato.
Haddii aad ka codsatay Maxkamadda magdhaw, waa inaad tagtaa dhageysiga cadeysaana dacwaddaada. Waa inaad ka dhaadhicin kartaa Maxkamadda in milkiilahaaga guriga ku guul dareystay inuu fuliyo waajibaadkii sharci ee aad ku laheyd waxaadna ku dhibtootay lumis iyo/ama waxyeelo natiijo ahaan.
Waxaad u baahaneysaa cadeymo ( tusaale sawiro, marqaatiyaal, waraaqihii aad u qortay milkiilahaaga guri ama akaaldda, rasiidyo qarash bixin ama qaansheegatooyin dayactirka waxyeelo ee qalabyadda).
Waxaad kaloo u baahan tahay inaad awoodid inaad u sharaxdo Maxkamadda si aad u xisaabtay sheegashaddaada magdhaw.
Soo saareen: Juun 2017
Compensation | Somali | June 2017